Ahoana no hanafenana ny kibonao amin'ny akanjo?
Vehivavy maro no mahafantatra tsara ny tsy fahatanterahan'ny tarehin'izy ireo, izay tsy maintsy afenina amin'ny vidiny rehetra. Matetika dia tsotra loatra ny fanakianana ny tenany, fa ahoana raha mbola misy ny fahavoazana? Ny iray amin'ireo faritra tena mahazatra indrindra amin'ny vehivavy dia ny vavony sy ny sisiny. Ary inona no fitafiana, miafina ny vavony, tokony handinika tsara?
Ahoana no hanafenana ny kibonao?
Mitadiava akanjo izay manafina ny vavony, fa tsy sarotra. Zava-dehibe kokoa ny fisafidianana ny kilasin'endrika. Hanombohana izany isika. Misy karazam-pandaminana maromaro mitrandraka miaraka amin'ny tandroka manify, vatana manokana izay tsy manitsy ny vavony, fa koa ny andaniny sy ny andilany. Tsy mora ny manao akanjo toy izany matetika, manamaivana mafy ny vatana, izay tsy dia tsara loatra. Mifidiana fitaovana voajanahary fotsiny ny vatany, mba ho velona ny hoditra. Alohan'ny hisafidianana akanjo, esory ny refy, satria tsy maintsy hividy maimaim-poana izy.
Ary ankehitriny dia miverina amin'ny akanjo isika. Ny vehivavy sasany, toy ny fomba iray manafina ny vavony, maka ireo akanjo volom-boninahitra izay mitovitovy amin'ny karavasy. Hadisoana lehibe izany. Tokony hifanaraka amin'ny habeny ny akanjo. Raha tsy izany, ny endriny dia mety ho lehibe kokoa.
Mba hanafenana ny kibo dia fidio ny akanjo miaraka amin'ny silhouette napetraka, vita amin'ny tapa-doko. Tsy misy akanjo ho an'ny vehivavy manana fanamiana tokony hanana singa fanampiny amin'ny endriky ny paosiny.
Raha ny pataloha sy ny jeans, dia tokony hipoitra ny endrik'izy ireo, ary tsy manana singa amin'ny endriny. Raha miresaka momba ny Accessories isika, toy ny fehikibo sy ny fehikibo, dia tsara kokoa izy ireo indraindray ny mandà, raha tsy izany dia misy ny mety hisongadina bebe kokoa ny fihodinan'ilay sary.
Ny loko sy ny printy dia manana anjara lehibe amin'ny fampifanarahana ny sarinao manontolo. Ny tondra-drano dia nafenina tsara, ilaina ny mifidy akanjo mitovy loko. Mifanaraka tsara ny tsipika avo lenta, saingy miaraka amin'izy ireo dia mendrika ny hitandrina kokoa.
Ny trangan-javatra kely hafa dia ny manala ny mason'ny kibonao. Ny fisian'ny tranaka tsara dia afaka milalao eny an-tanana. Mitafy akanjo miaraka amin'ny akorandriaka lalina, ary tsy hisy hahatsikaritra ny fahadisoanao.
Raha fantatrao ny fomba hafeninao amin'ny akanjonao, dia azonao atao ny mamorona sary tsy misy fotony izay ho lasa endriky ny vehivavy.
Sarin'ny sary an-dranomasina
Ny akanjo lafo indrindra eto amin'izao tontolo izao
Zava-dehibe ao amin'ny paositry ny zazavavy
Ahoana no hampifangaroana tsangambato eo amin'ny lohanao?
Hevitra ho an'ny sary mahafoy ny tia
Ireo akanjo mamy indrindra
Ny modelin'i Khokhloma
Lamina ambany akanjo fohy
Amin'ny inona ny manao akanjo akanjo?
Amin'ny akanjo hanaovana leoparda?
Ahoana ny fomba fitafy eny amoron-dranomasina?
Ahoana ny fihinanana sakafo?
Jenna Devan nizara sary iray tao anaty fitondrantenany taorian'ny fizarana tamin'i Chenning Tatum
Inona no tena eritreretin'i Jennifer Aniston momba ny fisarahana amin'i Brangelina?
Royal Kanin ho an'ny karazam-borona lehibe
Hevitra amin'ny kafe
Kitapo fandroana miaraka amin'ny bronzer
Ahoana ny fomba hanaovana fiara amin'ny mpamorona?
Vehivavy Bags 2016
Tsy voavidim-bola izy ireo: ohatra 40 ahitana asa tena tsara ho an'ny famoronana dokam-barotra
Sakafo maimaim-poana any am-pianarana
Ireo akanjon'ny ririnina ho an'ny vehivavy 2017-2018 - lohahevitra momba ny lamaody, vaovao, fironana
Mitafy hoditr'aina ny hoditr'ondry
Honey, lemon, glycerine avy amin'ny kohaka
Sand anaty voa - ny antony sy ny fitsaboana
Hazo fotsy maniry